Uhlelo lwe-magnetic inuduction brazing - umkhiqizi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
isimiso sokubhanqa ngamagnetic
Injongo: Ukushisa ipayipi yensimbi engenalutho, ukuhlanganiswa kwe-ferrule ne-elbow kuya ku-1400 ° F (760 ° C) ngaphakathi kwemizuzwana engu-20 yokubhonga.
Impahla engu-6 ″ (152.4mm) ubude x 0.5 ″ (12.7mm) ububanzi insimbi engagqwali yomsele, 0.5 ″ (12.7mm) ubude x 0.5 12.7 (2mm) ububanzi bomphetho, 50.8 ″ (0.5mm) indololwane eno-12.7 ″ (XNUMXmm ) ububanzi
I-Frequency 400 kHz
Izinsiza • I-DW-UHF-6KW-I yokushisa ukufakwa kokushisa okuhlonyelwe umsebenzi oqhelile wokusebenza • I-coil yokufakelwa kwe-induction eyenzelwe futhi ithuthukiswe ngqo kulolu hlelo lokusebenza.
Inqubo: I-coil ye-helical ephendulwa ngokukhethekile, isetshenziselwa ukunikeza ukushisa emhlanganweni endaweni ehlangene yobhontshisi. Izinsimbi ezimbili ezincane zesiliva ze-brader brace zifakwe kuhlangothini ngalunye; amajoyini agqoke ukufiphaza okumnyama ukuqinisekisa ukuthi impahla ye-braze igeleza ngokuhlanzekile. Umhlangano ufakwa ngaphakathi kwekhoyili kanye namandla asetshenziselwa imizuzwana ye-15 ukwenza ubhondi bugele.
Imiphumela / Izinzuzo: Ukushiswa kwe-Induction kunikeza: • Imiphumela ehambisanayo futhi ephindaphindiwe • Ayikho inqubo yelangabi • Isikhathi senqubo esheshayo
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi I-HF yokushisa isibambo, Steel Frequency Brazing steel, insimbi yokufaka ibhande, isimiso sokubhanqa ngamagnetic, I-RF yokukhipha isibambo sokushisa